ခယျြလျဆီး မှာ နရော ရဖို့ ဆကျလကျ တိုကျပှဲဝငျမှာ ဖွဈပမေယျ့ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီ မှာ အသငျးပွောငျးရှနေို့ငျခွေ လညျး ရှိတယျ လို့ အရိပျအမွှကျ ဆိုလာတဲ့ #ဂရြူး - SPORTS MYANMAR
ခယျြလျဆီး မှာ နရော ရဖို့ ဆကျလကျ တိုကျပှဲဝငျမှာ ဖွဈပမေယျ့ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီ မှာ အသငျးပွောငျးရှနေို့ငျခွေ လညျး ရှိတယျ လို့ အရိပျအမွှကျ ဆိုလာတဲ့ #ဂရြူး
ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ ပွငျသဈ လကျရှေးစငျ ၊ ဝါရငျ့ တိုကျစဈမှူး အိုလီဗီယာ ဂရြူး ဟာ ဒီနှဈ ဘောလုံး ရာသီ နညျးပွသဈ ဖရနျ့ လမျးပတျ လကျအောကျ မှာလညျး ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုကျစဈမှူး အနနေဲ့ သာ ရပျတညျ နခေဲ့ရပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ အကယျဒမီ ထှကျ လူငယျ တိုကျစဈမှူး တမျမီ အဘေရာဟမျ ဂိုးမွူးနခွေငျး နဲ့ တောကျလြှောကျ ခွစှေမျး ပွနခွေငျး ဟာ ၄ငျးရဲ့ ပှဲထှကျခှငျ့ တှကေို ပိုမို ဆုံးရှုံး စခေဲ့ပါတယျ ။
ဂရြူး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကတညျးက ပှဲထှကျခှငျ့ တှေ ပြောကျဆုံး နခေဲ့တာ ဖွဈကာ နညျးပွဟောငျး မျောရဈဇီယို ဆာရီ လကျအောကျ မှာလညျး ယူရိုပါလိဂျ ပွိုငျပှဲ မှာသာ အမြားစု ပှဲထှကျခှငျ့ ရရှိ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှေ့ နဲ့ ရာသီကုနျခါနီး မှာ ဂရြူး တယောကျ ခယျြလျဆီး ကနေ ပွငျသဈ လီဂူး သို့ ပွနျလညျ ပွောငျးရှေ့ ဖို့ အတျောလေး သတငျး တှေ ထှကျပျေါ ခဲ့ပါတယျ ။
အဆုံးမှာတော့ ဂရြူး ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ စာခြုပျ သကျတမျး တနှဈ ထပျတိုးကာ ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ တိုကျပှဲဝငျဖို့ ကွိုးစား ခဲ့ပါတယျ ။ ဒီနှဈ ရာသီ အစောပိုငျး က ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလျလုပှဲ နဲ့ လကျစတာ နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ တှမှော ဂရြူး ဟာ ပှဲထှကျခှငျ့ ရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး အဘေရာဟမျ ဟာ အတျောလေး ခွစှော ခဲ့တာကွောငျ့ ဂရြူး အဖို့ ပိုပွီး ရုနျးကနျ ရမယျ့ အနအေထား ကို ရောကျရှိ လာပါတယျ ။
သို့ပမေယျ့ လညျး လကျရှေးစငျ အသငျး မှာတော့ ဂရြူး ဟာ နညျးပွ ဒီဒီယာ ဒကျဈခမျြ့ဈ ရဲ့ စိတျကွိုကျ ဦးစားပေး တိုကျစဈမှူး အဖွဈ ရပျတညျ နဆေဲ ဖွဈကာ မနညေ့ က ကစား သှားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခွစေဈ ပှဲစဉျ ဖွဈတဲ့ တူရကီ အသငျး နဲ့ ပှဲမှာ လူစားဝငျကာ ဂရဇျမနျး ရဲ့ ဖနျတီး ပေးပို့မှု ကနေ တဆငျ့ သှငျးဂိုး တဂိုး ရယူ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ထိုဂိုးကွောငျ့ ဂရြူး ဟာ ပွငျသဈ အသငျး အတှကျ ဒုတိယ ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးယူ ထားတဲ့ ပလာတီနီ နဲ့ ၃ဂိုး အကှာ ကို ရောကျလာခဲ့ပါတယျ ။
ထို ပှဲစဉျ အပွီး အငျတာဗြူး မှာတော့ ဂရြူး က ခယျြလျဆီး အသငျး မှာ ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ ဆကျလကျ တိုကျပှဲဝငျသှားမှာ ဖွဈကွောငျး ၊ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှေ့ မှာ ခယျြလျဆီး ကနေ ထှကျခှာဖို့ မဖွဈမနေ လိုအပျ နတောမြိုး မဟုတျပမေယျ့ အနာဂတျ အတှကျ စဉျးစား သှားခငျြကွောငျး ၊ နိုငျငံ အသငျး နဲ့ သူ ခွစှေမျး ပွနတောတှကေို ဖရနျ့ လမျးပတျ မွငျတှေ့ လိမျ့မယျ လို့လညျး ယုံကွညျကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ ။
ဂရြူး က ” ကြှနျတျော ဟာ ခယျြလျဆီး အသငျး မှာ ပှဲထှကျခှငျ့ တနရော ရဖို့ အတှကျ ဆကျလကျ တိုကျပှဲဝငျသှားမှာပါ ။ ဒါကို နညျးပွ လညျး သိထားပါတယျ ။ အနာဂတျ အကွောငျး ကိုတော့ လာမယျ့ ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှေ့ မှာ ကြှနျတျော တို့ စဉျးစား သှားမှာပါ ။ အကယျ၍ ကြှနျတျော ခယျြလျဆီး ကနေ ထှကျခှာခငျြခဲ့ရငျ ? တကယျတမျး တော့ ဒါက လောလောဆယျ မှာ မလိုအပျသေးပါဘူး ။ ”
” ဒါပမေယျ့ ကြှနျတော့ အနနေဲ့ ရှေးခယျြမှု တခု လုပျရမယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျော ဟာ ရှလြေှ့ောကျ နှဈ အနညျးငယျ လောကျ ဘောလုံး ကောငျးကောငျး ကစားလို့ ရနိုငျပါသေးတယျ ။ အသကျ ၃၃ နှဈ ရှိပွီ ဆိုပမေယျ့ ကြှနျတော့ မှာ သနျစှမျးတဲ့ ခွထေောကျ တှေ ရှိသေးတယျ ၊ ကနျြးမာတဲ့ ဘဝ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားပွီး ကွံ့ခိုငျမှု အပိုငျး အရလညျး အကောငျးဆုံး အနအေထား မှာ ရှိနပေါတယျ ။ ဆကျလကျပွီး ဘောလုံး ဆကျကစားဖို့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွတျသနျး ခငျြပါသေးတယျ ။ ”
” ခယျြလျဆီး အသငျး ကတော့ ကြှနျတော့ ရဲ့ ဦးစားပေး ရှေးခယျြမှု ထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အဆုံးမှာ စိတျပိုငျးဖွတျပွီး ရှေးခယျြရရငျ တော့ အာဆငျနယျ ကနေ ထှကျခှာ လာတုနျးက ဆုံးဖွတျခကျြ အတိုငျး ထပျပွီး လုပျဆောငျ သှားဦးမှာပါ ။ မနျနဂြော ဟာလညျး ကြှနျတော့ ရဲ့ လကျရှေးစငျ အသငျး က ခွစှေမျး တှကေို ကွညျ့ရှု နမေယျ လို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ ခယျြလျဆီး ကို ပွနျပွီး ကြှနျတျော ဘာတှေ လုပျပွ နိုငျသလဲ ဆိုတာ ဆကျလကျ ပွသ သှားမှာပါ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။
ချယ်လ်ဆီး မှာ နေရာ ရဖို့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြေ လည်း ရှိတယ် လို့ အရိပ်အမြွက် ဆိုလာတဲ့ #ဂျရူး
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် ၊ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျရူး ဟာ ဒီနှစ် ဘောလုံး ရာသီ နည်းပြသစ် ဖရန့် လမ်းပတ် လက်အောက် မှာလည်း ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုက်စစ်မှူး အနေနဲ့ သာ ရပ်တည် နေခဲ့ရပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အကယ်ဒမီ ထွက် လူငယ် တိုက်စစ်မှူး တမ်မီ အေဘရာဟမ် ဂိုးမြူးနေခြင်း နဲ့ တောက်လျှောက် ခြေစွမ်း ပြနေခြင်း ဟာ ၄င်းရဲ့ ပွဲထွက်ခွင့် တွေကို ပိုမို ဆုံးရှုံး စေခဲ့ပါတယ် ။
ဂျရူး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ကတည်းက ပွဲထွက်ခွင့် တွေ ပျောက်ဆုံး နေခဲ့တာ ဖြစ်ကာ နည်းပြဟောင်း မော်ရစ်ဇီယို ဆာရီ လက်အောက် မှာလည်း ယူရိုပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာသာ အများစု ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ နဲ့ ရာသီကုန်ခါနီး မှာ ဂျရူး တယောက် ချယ်လ်ဆီး ကနေ ပြင်သစ် လီဂူး သို့ ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ အတော်လေး သတင်း တွေ ထွက်ပေါ် ခဲ့ပါတယ် ။
အဆုံးမှာတော့ ဂျရူး ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တနှစ် ထပ်တိုးကာ ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနှစ် ရာသီ အစောပိုင်း က ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲ နဲ့ လက်စတာ နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် တွေမှာ ဂျရူး ဟာ ပွဲထွက်ခွင့် ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အေဘရာဟမ် ဟာ အတော်လေး ခြေစွာ ခဲ့တာကြောင့် ဂျရူး အဖို့ ပိုပြီး ရုန်းကန် ရမယ့် အနေအထား ကို ရောက်ရှိ လာပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် လည်း လက်ရွေးစင် အသင်း မှာတော့ ဂျရူး ဟာ နည်းပြ ဒီဒီယာ ဒက်စ်ချမ့်စ် ရဲ့ စိတ်ကြိုက် ဦးစားပေး တိုက်စစ်မှူး အဖြစ် ရပ်တည် နေဆဲ ဖြစ်ကာ မနေ့ည က ကစား သွားခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ် ပွဲစဉ် ဖြစ်တဲ့ တူရကီ အသင်း နဲ့ ပွဲမှာ လူစားဝင်ကာ ဂရဇ်မန်း ရဲ့ ဖန်တီး ပေးပို့မှု ကနေ တဆင့် သွင်းဂိုး တဂိုး ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ထိုဂိုးကြောင့် ဂျရူး ဟာ ပြင်သစ် အသင်း အတွက် ဒုတိယ ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူ ထားတဲ့ ပလာတီနီ နဲ့ ၃ဂိုး အကွာ ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။
ထို ပွဲစဉ် အပြီး အင်တာဗျူး မှာတော့ ဂျရူး က ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ ချယ်လ်ဆီး ကနေ ထွက်ခွာဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ် နေတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် အနာဂတ် အတွက် စဉ်းစား သွားချင်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံ အသင်း နဲ့ သူ ခြေစွမ်း ပြနေတာတွေကို ဖရန့် လမ်းပတ် မြင်တွေ့ လိမ့်မယ် လို့လည်း ယုံကြည်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ဂျရူး က ” ကျွန်တော် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ ပွဲထွက်ခွင့် တနေရာ ရဖို့ အတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ ။ ဒါကို နည်းပြ လည်း သိထားပါတယ် ။ အနာဂတ် အကြောင်း ကိုတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ ကျွန်တော် တို့ စဉ်းစား သွားမှာပါ ။ အကယ်၍ ကျွန်တော် ချယ်လ်ဆီး ကနေ ထွက်ခွာချင်ခဲ့ရင် ? တကယ်တမ်း တော့ ဒါက လောလောဆယ် မှာ မလိုအပ်သေးပါဘူး ။ ”
” ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ အနေနဲ့ ရွေးချယ်မှု တခု လုပ်ရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဟာ ရှေ့လျှောက် နှစ် အနည်းငယ် လောက် ဘောလုံး ကောင်းကောင်း ကစားလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ် ။ အသက် ၃၃ နှစ် ရှိပြီ ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့ မှာ သန်စွမ်းတဲ့ ခြေထောက် တွေ ရှိသေးတယ် ၊ ကျန်းမာတဲ့ ဘဝ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ကြံ့ခိုင်မှု အပိုင်း အရလည်း အကောင်းဆုံး အနေအထား မှာ ရှိနေပါတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး ဘောလုံး ဆက်ကစားဖို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်း ချင်ပါသေးတယ် ။ ”
” ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကတော့ ကျွန်တော့ ရဲ့ ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှု ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဆုံးမှာ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ရွေးချယ်ရရင် တော့ အာဆင်နယ် ကနေ ထွက်ခွာ လာတုန်းက ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း ထပ်ပြီး လုပ်ဆောင် သွားဦးမှာပါ ။ မန်နေဂျာ ဟာလည်း ကျွန်တော့ ရဲ့ လက်ရွေးစင် အသင်း က ခြေစွမ်း တွေကို ကြည့်ရှု နေမယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ချယ်လ်ဆီး ကို ပြန်ပြီး ကျွန်တော် ဘာတွေ လုပ်ပြ နိုင်သလဲ ဆိုတာ ဆက်လက် ပြသ သွားမှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။